Akhriso Warmurtiyeedka Shirka Madasha Dastuurka ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay. – Hornafrik Media Network
Shirka Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee Dawladda Federaalka iyo Dawlad Goboleedyada oo ka socday muddo labo maalmood ah magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo laga soo saaray War Murtiyeed.
Shirkan ayaa laga soo saaray War Murtiyeed ka kooban 13 qodob kuwaasoo ahaa nuxurka kulankan oo socday muddo labo cisho ah ayna ka soo qeybgaleen Wasiirada Dastuurka ee dowlad goboleedyada dalka iyo wakiilo ka socday maamulka gobolka Banaadir.
UJEEDOOYINKA KULANKA LABAAD EE MADASHA
Ujeedooyinka kulanka labaad ee Madasha waxa uu ahaa isbarashada iyo soo dhoweynta iyo xog is dhaafsiga Wasiirada cusub ee Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee dowlad goboleedyada Puntland,KoofurGalbeed iyo Galmudug.
Sidii wasaaradaha Arrimaha Dastuurka iyo Dowlad Goboleedyada looga taageeri lahaa howlaha culus ee loo igmaday lana xiriira dastuurka gaar ahaan arrimaha waxbarashada madaniga iyo wacyi gelinta dadweynaha.
Iyo in si wadajir ah loogu diyaargaroobo Shirweynaha Qaran ee daahfurka ololaha Dib-u Eegista dastuurka kaasoo dhici doona 8-10 Oktoobar 2017.
3) Madashu waxay aad u bogaadisay dhismaha Madashan iyo kulamada wadatashiga joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dastuuka XFS ay la yeelanayso Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Daawo RaiisulWasaare Khayre oo Ka Hor Hadlay Qaramadda Midoobay, Codsadayna in Somalia faragalinta laga daayo.